Updated News in Nepali from all over the world at : http://nepali.reaknlinks.com. भोजराजको ‘अन्तिम प्रश्न’ सार्वजनिक
बिएल कला/ काठमाडौं
साहित्यकार भोजराज घिमिरेको कथासंग्रह ‘अन्तिम प्रश्न’ शनिबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
१६ वटा कथाहरु संगृहीत उक्त कृतिमाथि समालोचकद्वय उपप्राध्यापक डा. विन्दु शर्मा र उपप्राध्यापक महेश पौड्यालले टिप्पणी गरेका थिए।
पुस्तकमाथि समीक्षा गर्दै समालोचक पौड्यालले घिमिरेका कथामा जीवनबोधी चेतना रहेको उल्लेख गरे। उनले अन्तिम प्रश्नभित्रका कथाले नेपाली समाज, जनजीवन र नेपाली मनोविज्ञान उद्घाटन गरेको बताए। पूर्वमुख्यसचिवसमेत रहेका घिमिरेका कथामा कथाकारका जागिरे जीवनका अनुभूति सूक्ष्म रुपमा आएका उल्लेख गरे।
पौड्यालले विषय विविधता घिमिरेका कथाहरुमा रहेको भन्दै सरल र सहज अनि मर्यादित भाषाशैलीको प्रयोग भएको पनि बताए ।
काठमाडौँ स् साहित्यकार भोजराज घिमिरेको कथासंग्रह ‘अन्तिम प्रश्न’ शनिबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
१६ वटा कथाहरु संगृहीत उक्त कृतिमाथि समालोचकद्वय उपप्राध्यापक डा। विन्दु शर्मा र उपप्राध्यापक महेश पौड्यालले टिप्पणी गरेका थिए । पुस्तकमाथि समीक्षा गर्दै समालोचक पौड्यालले घिमिरेका कथामा जीवनबोधी चेतना रहेको उल्लेख गरे । उनले अन्तिम प्रश्नभित्रका कथाले नेपाली समाज, जनजीवन र नेपाली मनोविज्ञान उद्घाटन गरेको बताए । पूर्वमुख्यसचिवसमेत रहेका घिमिरेका कथामा कथाकारका जागिरे जीवनका अनुभूति सूक्ष्म रुपमा आएका उल्लेख गरे । पौड्यालले विषय विविधता घिमिरेका कथाहरुमा रहेको भन्दै सरल र सहज अनि मर्यादित भाषाशैलीको प्रयोग भएको पनि बताए ।
यसरी नै अर्का समालोचक डा। विन्दु शर्माले अन्तिम प्रश्न कथाकृतिभित्रका कथाले समग्र नेपाली सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेशको चित्रण गरेको बताइन् । डा। शर्माले पात्र चयनमा र परिवेश चित्रणमा कथाकार सफल भएका उल्लेख गरिन् । सन्दर्भ र परिवेशअनुसारका पात्रको चयन, उनीहरुको समाज र परिवेशअनुसारकै संवाद, कथाभित्रको द्वन्द्व, पात्रहरुबीचका परिघटनाहरु निकै परिपक्व रहेको धारणा राखिन् । सलल बगेका कथाले घिमिरेको कथालेखनको सरलता र सौम्यता पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव कवि तथा गीतकार डा। विमल कोइरालाले सिर्जना कर्म अत्यन्त गाह्रो काम हुने धारणा राखे । जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर विधाभञ्जन गर्नु चानचुने कुरा नभएको कोइरालाको भनाइ थियो । घिमिरेको पछिल्लो समयमा देखिएको लेखनप्रतिको ऊर्जा देख्दा आफूलाई खुसी र अचम्म दुवै लागेको कोइरालाले बताए ।